Kedu otu esi ahọrọ masks PM2.5? Anwụrụ ọkụ jupụtara n'obodo ndị a nke ugbu a, ikuku ikuku na-echekwa echiche. Anyị na-atụle na ihe nkpuchi na-ezo aka na ihe nkpuchi echepụtara maka PM2.5, ebe a na-ejikarị ihe nkpuchi obodo eme ihe iji gbochie oyi. Ihe ha na nkọwa ha enweghi ihe choro ...
Anti haze nkpuchi bụ ihe dị mkpa kwa ụbọchị na ndụ kwa ụbọchị, nke nwere ike igbochi uzuzu, haze, ihe nfụkasị pollen na ọrụ ndị ọzọ, ma gbochie ájá ịbanye na ngụgụ ahụ site na oghere ọnụ na oghere imi na imebi ahụ. Ugbu a, ka anyị hụ ihe ụzọ ziri ezi na-eyi a haze nkpuchi m ...
Ihe nkpuchi PM2.5 maka ụmụaka ga-enwekwa mmetụta ụfọdụ. Ngwaahịa dị mma nwere ike igbochi ọtụtụ mmetọ ikuku. Mmetụta ha bara uru ga-emetụta ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa, dị ka ụdị mmetọ ikuku, dịka ma oke nke nkpuchi ahụ kwesịrị ekwesị, dịka otu esi eyi ...
Arụ Ọrụ 2020
2020, AH-CENTER CO., LTD 2,000,000,000 PC nwere ike ikpuchi ihu, 8,000,000 PC FFP2 / FFP3 KN95 Mask, uwe nchekwa 5,000,000 na 1,000,000 Fronthead InfraRed Thermometer. .
Ah-Center Co., Ltd natara ndị ọcha ndepụta nke Chinese ọgwụ n'ichepụta ụlọ ọrụ
Ihe nkpuchi mepụtara site na AH-CENTER CO., LTD akwadola asambodo ikike mba ofesi nke FDA.
Ihe nkpuchi mepụtara site na AH-CENTER CO., LTD kwadoro CE, 5 June 2020
AH-Centre CO., LTD nwe ọgwụ mmepụta ihe bụ m, II, III ngwá ọrụ ahụike na ụlọ ọrụ ahịa, ụlọ ọrụ ahụ dị na mpaghara mmepe qianhan yuantan.
AH-Centre CO., LTD nwe ọgwụ mmepụta ihe bụ m, II, III ngwá ọrụ ahụike na ụlọ ọrụ ahịa, ụlọ ọrụ ahụ dị na mpaghara mmepe qianhan yuantan. The ụlọ ọrụ nwere a 100,000-ọkwa ọcha ogbako nke 1600 square mita, onwem na 9 disposable ọgwụ nkpuchi akpaka produc ...